Akhriso Xog Laga Helayo Haweeney Jarmal Ah Oo Lagu Afduubtay Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Akhriso Xog Laga Helayo Haweeney Jarmal Ah Oo Lagu Afduubtay Muqdisho.
Wararka nagasoo gaaraya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xalay fiidkii hore rag hubeysan oo aan weli haybtooda lagaran ay xoog ku galeen xarunta Hey,ada ICRC ee Magaalada Muqdisho, taas oo ku taala agagaarka Hotelka Shamow ee degmada Wadajir.
Raga hubeysan ayaa xarunta ka afduubtay Haweeney u dhalatay wadanka Jarmalka, mana jirin wax is rasaaseyn ah oo ka dhacday goobta sida dad goob jogayaal ah ay u sheegeen warbahinta.
Saraakiil u hadlay kooxda ridada Soomaaliya ayaa sheegay in haweeneydaas u dhalatay dalka Jarmaalka uu afduubkeeda ka dambeeyey mid ka mid ah ilaalada gaarka ah ee hey,ada ay haweeneydu u shaqaynaysay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gaarigii lagu afduubtay haweeneyda Jarmalka ah laga helay nawaaxiga Isbitaala Digfeer oo ay maamusho dowlada Turkiga, balse aanan la ogeyn halka raggii afduubka ka dambeeyay ay la aadeen haweeneydaasi.
Hey,ada ICRC ayaa dhankeeda war ay soo saartay ku xaqiijisay in qof kamid ah shaqaalaheeda Ajnabiga ah ee ka howl galayay magaalada Muqdisho la afduubtay, iyagoona walaac ka muujisay badqabka qofkaas ajanabiga ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee dhacdadaan la xiriira ayaa sheegaya in hay’ada ICRC ay bilowday in Magaalada Muqdisho ay daabusho dhamaan shaqaalaheeda Ajanabiga kadib dhacdadaan afduubka ah.
Ilaa laba qofood oo ajaanib ah kana tirsanaa masuuliyiinta hay’adaas ayaa la sheegay in maanta laga dhoofiyay garoona diyaaradaha Muqdisho, kadib markii Ammaankooda loo baqay.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kusoo laalaabtay weerarada ka dhanka ah shaqaalaha Ajaanibta ah ee ka hawlgala xarumaha hay’adahaas ay ku leeyihiin caasimada Soomaaliya.
Mudddo bil kahor ah ayay ahayd markii nin u shaqaynayay hay’ada UNICEF ee hoostagta waxa loogu yeero qaramada Midoobay una dhashay wadanka Yugaandha lagu dilay gudaha xarunta hay’adaas ee Magaalada Muqdishi, falkaas oo la sheegay inuu geystay nin ka tirsanaa isla shaqalaha Hay’adda.
Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan hey,ado fara badan oo reer galbeed ah kuwaas oo intooda badan xarumahooda ay ku yaalaan gudaha Xerada Xalane, balse waxaa jira qaar fara kutiris ah kuwaas oo xarumo aad loo ilaaliyo kuleh xaafadaha ka agdhaw Xerada Xalane iyo Garoonka diyaarada Muqdisho.